Iimpawu zokubumba kwasebusika
I-Cosmetics, esiyisebenzisa ebusika, kufuneka ihambelane ngokupheleleyo nemimozulu. Emva kwakho konke, iindlela ezikhethiweyo ezifanelekileyo zokubumba zingasinceda sigcine isikhumba sempilweni kwaye sihle kakhulu kwiimeko zempilo yezixeko ezinkulu, sikhusele ekungcoliseni amanzi, ukuphelelwa kwimozulu, ukuguga kwangaphambili. Ngendlela yokukhetha iimveliso zokunakekelwa kwesikhumba, siya kuxubusha ngezantsi. Umqathango wokuqala omele ugcinwe xa ukhetha ukwenza i-makeup uhlala uqwalasela uhlobo lolusu. Ubusika - eli lixesha apho kukho iingxaki ezintsha ekunyamekeleni kwesikhumba.
Ngoko, inhlanhla ebusika, abo banesifo esinamafutha kunye ne-pores dilates, kwi-cold pores baba mncinci, kwaye ulusu luzuza umbala we-matte. Isimo esingathandekiyo siya kuba ngabanini besikhumba esomileyo kunye nentsebenziswano, ngoko isikhumba (isikhumba) siza kuhlaselwa ngamandla.
Ukutyalwa kwebusika akufanele kugxininise kuphela isidima sobuso bakho, kodwa usikhusele kunye nesimo sezulu esinzima, sinakekele kwaye ubuyisele ukulinganisela kwamanzi.
I-Zimaneet isikhumba sethu njengeengxaki ezinobanda kunye nomoya ongaphandle, umoya omile ngaphakathi. Isikhumba silahlekelwa ngumswakama obalulekileyo, kumiswa, imibimbi emancinci ingabonakala. Ngoko ke, ebusika, kufuneka ukhethe isiseko esinomphumela wokunyusa.
Kukho enye icebiso-ukongeza idibansi yamanzi kwisithintelo ngaphambi kokuba uyisebenzise ebusweni. Ukuba usebenzisa ipowder, ngoko-ngaphambi kokuhambisa umbane ngobuncitshi ngamanzi amaminerali okanye amanzi ashushu emva kwemizuzu embalwa ngaphambi kokufaka isicelo sokwenza.
Ebusika, sebenzisa i-tonal base ngaphandle kokumakisha kwilebula engenayo i-oyile, enomfanekiso obanzi oza kunika nje isikhumba ilona elungileyo, kodwa uyakukhusela kwimozulu. Emva koko, isiseko asikona nje umbala omhle wesikhumba, kodwa ukhuseleko oluvela kwiqhwala ezinzima.
Ukuba ulusu luba mnyama ngenxa yokutshiswa kwelanga kunye neqondo elinamandla lamavithamini D, ubusika bubala. Kungcono ebusika ukumbamba nge-tonal base kwi-tonne ukukhanya kunombala wendalo.
Ebusika, kuyimfuneko ukuba ube ne-corrector okanye i-concealer, kuba izibhunqa kunye nezibonda ezimnyama ziya kubonakala ngakumbi kwesikhumba esikhanyayo.
UDazhene ukhangela ukuba ebusika imeko yezulu iyingozi, i-cosmetologists icebisa ukusebenzisa i-tonal base ngepropati ye-sunscreen. Hlanganisa nale ngcebiso ebusika, kwaye unokwandisa ulutsha lolusu ixesha elide!
AmaFrost alungileyo kuba anikezela ulusu lwethu olusenyameni. Ngoko ke, ngexesha lebusika, kuyimfuneko kuphela ukugxininisa i-cheekbones kancane nge-red, ukwenzela ukuba umphumo we-matryoshka awusayi kuba ngenxa yokuba ngaphezu kwe-blush, iqhwa liye lenza umsebenzi walo.
Ukuba awufuni ukubonakala ngathi u-Nicole Kidman, i-Snow White, okanye uDita von Teese, kwaye uyasaba i-solarium, sebenzisa ukuzicoca. Nangona kunjalo, kukho uluvo lokuba ngexesha lebusika alikhangeleki ngokwemvelo.
Ebusika, kucetyiswa ukuba usebenzise ubhedu obhedu, obona kuphela ukukhanya kweetoni kunebala lomzimba wesikhumba. I-Razustushte ithetha ngoncedo lwebhashishi ngesistim setyhula, thintela ebunzini, intonga kunye ne-chin, i.e. imes, apho i-tan ibonakala kuqala. Phezulu ngokuqhekeza ngokuqhelekileyo.
Qaphela, usebenzisa i-bronzing rouge, ngaphandle koko unobungozi bokufumana ubuso obuhle. Ehlobo, i-bronzer isetyenziselwa ukutyhulwa kwemvelo iya kuba yinto efanayo, kodwa ebusika ingenza isikhumba singavumelekile.
I-Lipstick ekulweni nokulwa
Ebusika, imilomo yethu iyona nto ibuhlungu kwiqhwa. Siyabonisana, siyabanga, sibaqhawula, isisindo somlomo sisilula ngokukhawuleza, sibonisa isikhumba emoyeni weqabunga. Xa ukhetha i-lipstick ebushushu bezulu, khangela izithako eziza kuphucula umlomo wakho kwaye zondle ngevithamini.
Ebusika, landela imigaqo emibini elula:
Okokuqala, peyinta imilomo yakho ngeendlela ezininzi, uqala ngokuqinileyo, ukhathalele kwaye ukhusele ukubola, uze usebenzise umlomo, uze usebenzise i-gloss kwi-glossy effect. Ngoko unokubakhusela ngokukhuselekileyo kwaye ubanike umboniso omhle nakwiimeko zezulu ezibi.
Imibala efudumeleyo yomlomo oqaqambileyo oqhathaniswa nekhanda elimhlophe libukeka likhulu ngexesha lokubusika. Imibala yasebusika - obomvu, i-caramel, ikhofi, ama-mahogany, mocha, iwayini ecebileyo.
Okwesibini, iindlela zokunyamekela imilomo mazibe kwisigebheni sakho rhoqo ukuba unokubeka umgca ngexesha xa kuyimfuneko.
I-non-nuisance iyesabekayo kunokuba isetyenziswe ngomlomo, i-lipstick-bitten lips. Ubusika, kunconywa ukuba wenze umlomo uphawule okungenani kanye ngeveki, ukwenzela ukuba i-lipstick ibhubhe kwaye igcinwe kangcono.
Senza ukhangelelwano olucacileyo
Ukuba sithetha ngemibala efanelekileyo yokusebenzisa ebusika, ngoko-mnyama kwaye i-brown brown, iwayini, imfusa, i-gray tones. Yonke into eqaqambileyo kufuneka isetyenziswe ehlobo, ukuba, ngokuqinisekileyo, akuyiyo imfashini. I-Pastel ne-shades ebandayo ayifuni ebusika. Kodwa ukuba ungazifuni ukuyeka iimpawu zakho ezithandayo zasehlotyeni, kulungele ukuxuba izithunzi zakho ngezithunzi ezimnyama. Oku kuya kwenza umbala ube mncinci ngakumbi, kodwa awutshintshi kakhulu.
Ubusika lixesha lokujonga ukutshaya. Kubukeka kakuhle njenge-sequin, kodwa imilomo ikhethwa ukuba yenziwe kwindlela yokutya.
I-Chernyatush, inika ivolumu kwi-eyelashes, iyancedisa ngokupheleleyo i-smokey. Kufanelekile ukukhumbula ukuba umthamo we-eyelashes unceda ukufezekisa i-formula ye-carcass ngokwayo, kodwa i-form of the brush. Ukuqwalasela iibhulashi zikhulu, umnqweno uya kubamba iindawo ezinzima zokufikelela kwi-eyelashes.
Ukudibanisa ne-mascara ebusika, sebenzisa imisonto emfusa, emnyama kunye ne-brown kunye ne-antimony. Kwaye ukuze ugweme ukusasazeka kwiintsuku ezinqamlekileyo kunye ne-snow, sebenzisa i-mascara engenawo amanzi. Ebusika, i-mascara kufuneka isetyenziswe kwiziqendu ezi-2, sisebenzise isalathisi sesibini emva kokuqala komileyo, oku kuya kunceda ukuba i-glaze ingabambisani.
Ukuba usebenzisa ezi ngcebiso, unokukhangeka uzikhangele kwaye uzilungele kakuhle. Ulusu lwakho luya kuphila kwaye lukhuselekile ngexesha lebusika ebusika. Kwakhona khumbula ukuba kufuneka uhlambe ubuso bakho ngamanzi afudumeleyo, kufuneka uphume waya kwisitrato ungaphantsi kwemizuzu engamashumi amathathu ukuya kwamashumi amathathu emva kokusebenzisa iimveliso zokunyamekela, kuba isikhumba esisinyamezelayo sisimo sezulu ngokukhawuleza.
Khangela-2016: ukwakheka kwimizimba evela kwiDior
Umoya weManitou kwiqoqo lobuhlanga lwe-MAC Vibe Tribe Ehlobo 2016
Yenza uphando lwaseMpumalanga
I-Technique ekwenzeni imveliso yobudala
Ama-muffins aseBhanana kunye nobusi kunye nebhotela
Unokukhetha njani iibhola ze-suede eziphezulu
Indlela yokunyamekela izitya zasekhishini
Amanzi olwandle kwimpilo yabasetyhini
Isalathisi eboyiweyo kunye nekristy curd cream
Yintoni abazali abayenzayo xa bebancinci abantwana?
Kataef - ama-pancakes ase-Arabia kunye ne-custard
I-Sauerkraut ebusika: zokupheka zeklasi kwi-jar-3 litre (iindlela ezikhawulezayo)
Ukuzixilonga ngezifo ekuqaleni
Utamatisi kwijusi yawo ebusika: ngaphandle kobuncwane kunye nayo, iincindi. Iifatyambo ezilula zinyathelo-nge-step with photo of tomato kwijusi yakho ebusika
Ukuhamba ngesitimela nomntwana: oko kufuneka uyenze ingqalelo
I-Vitamin isela isilingo sasebusika